Imibuzo evame ukubuzwa - Yixing Cleanwater Chemicals Co., Ltd.
Amasampula, isikhathi phambili imayelana 3 izinsuku. Ukuze ukukhiqizwa ngobuningi, isikhathi phambili izinsuku 7-15 ngemuva kokuthola inkokhelo idiphozi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma isikhathi sethu sokuhola singasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.